Ị nwere ike ịgwa m otú backlinks si arụ ọrụ iji mee ka okporo ụzọ weebụ m dịkwuo elu?
N'oge a, ọtụtụ webmasters novice na ndị na-azụ ahịa n'Ịntanet na-elekwasị anya na Nchọpụta Nchọpụta Mmasị (dịka ọmụmaatụ, isiokwu, ebe nrụọrụ weebụ, wdg.). Na mgbe mgbe, ha na-akwụ ụgwọ na-ezughị ezu maka otú backlinks na-arụ ọrụ maka arụmọrụ zuru ezu nke weebụsaịtị ha. N'ịme nke ahụ, ha na-eleghara mkpa nke backlinks - dị ka ọtụtụ n'ime ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ kweere na àgwà azụlinks na-ejikarị ihe dị ka pasent 80 nke mkpokọta weebụ bara uru site na nchọta nke Google search engine algorithm.Ya mere, na-akọwa otú backlinks na-arụ ọrụ maka ebe nrụọrụ weebụ gị, anyị nwere ike ikweta na ịzụlite ha site na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ na-ezo aka na ebe nrụọrụ weebụ gị na-emezi nlezianya vidio maka ọchụchọ. Nke ahụ bụ ihe kpatara ya mgbe a bịara jikọta ụlọ, a na-ahụkarị ya dịka ohere buru ibu ka ọ gafere.
Ka o sina dị, ụfọdụ ndị ka na-ezere ụlọ azụ azụ. O kwesịkwara ime gị, ebe a bụ ụfọdụ isi ihe mere backlinks ji arụ ọrụ iji mee ka okporo ụzọ weebụ gị dịkwuo elu. N'igosipụta ya n'asụsụ Bekee, a backlink bụ njikọ nke jikọtara ibe weebụ abụọ dị iche iche. N'ezie, ị nwere ike ịnweta njikọ dị n'ime ụlọ na-ejikọta ibe weebụ dị iche iche n'ime ebe nrụọrụ weebụ gị (maka mma igodo, na ntinye aha ntụgharị). A sị ka e kwuwe, gịnị kpatara anyị niile ji echegbu onwe anyị banyere àgwà ndị dị mma? N'ihi na echiche nke isi engines ọchụchọ (dị ka Google onwe ya, yana Bing na Yahoo), backlinks na-egosi na uru weebụ na bara uru maka ndị mmadụ. Ọ bụ ya mere inwe ezigbo profaịlụ backlink ga-abụ ihe mgbaàmà dị ike maka engines na-achọ iji nweta ebe nrụọrụ weebụ gị "na-atụ aro" maka ndị na-ege ntị, na-eche na ọ ghaghị ịbụ ihe bara uru ma baara ndị mmadụ uru.Na - cheta - enwere ọtụtụ njirimara azụlinks na-ekpebi àgwà ha. Dịka ọmụmaatụ, backlink na-abịa site na akụ bara uru na ụlọ ọrụ weebụ gị kachasị mkpa ga-enwe ibu arọ karị. N'ụzọ dị otú ahụ, ndị sitere na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ na nnukwu PR (peeji nke ọkwa), DA (ngalaba ikike), na PA (ikike nchịkwa) ga-abawanye uru.
Ya mere, olee ụzọ kacha mma ị ga-esi nweta akara azụ azụ dị mma na-atụ aka na ebe nrụọrụ weebụ gị maka ọkwa dị elu na ndepụta nke ọchụchọ? N'ezie, inwe ọdịnaya nke ọdịnaya na-apụtakarị na ị nwetaworị njikọ ụfọdụ na-atụghachi azụ na weebụsaịtị ma ọ bụ blog gị. Ka o sina dị, n'eziokwu, nke ahụ agaghị ezuru ma ọ bụrụ na ị na-atụle nyocha nke ịchọta nke ọma. Echere m na ị ga-eme nke ọma ma mee ka ndị ọzọ nweghachi àgwà azụmaahịa. Nke a bụ otu:
nyochaa na profaịlụ backlink nke onye na-asọmpi na-eji ihe nyochaa na ntanetị dịka Majestic SEO, Semalt Analyzer, ma ọ bụ Open Site Explorer iji mee ka ndị kachasị mma na ebe nrụọrụ weebụ gị.
gbalịa izipu ozi ndị ọbịa - egbula oge itinye oge maka ederede ọdịnaya maka ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ iji nweta backlink na ebe nrụọrụ weebụ gị na nloghachi.
na-elekwasị anya n'ihe niile edere akụkọ maka ịmepụta ntọhapụ maka ịkekọrịta ma na-eme ka ọnụ ọgụgụ azụ gị dịkwuo elu.
na-arụsi ọrụ ike na mgbasa ozi ọha na eze iji melite ikike ikikere nke ebe nrụọrụ weebụ, gosi ọrụ ọkachamara gị, ma bulie ụfọdụ backlinks n'otu oge Source .